1.	လိုတရ ဆိုတာဘာလဲ။
လိုတရ ဆိုသည်မှာ သင်၏နေ့စဉ် လိုအပ်သမျှ သတင်းအချက်အလက်များကို တစ်နေရာတည်းတွင် စုံလင်စွာ သိရှိနိုင်မည့် MPT ၏ အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ လိုတရတွင်ပါဝင်သည့် သတင်းစုံ၊ ကဏ္ဍစုံ၊အကြောင်းအရာအစုံ အလင်များက သင်သိရှိလိုသည့် အရာများကို ပြည့်စုံစွာ သိရှိစေနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ဖုန်းအက်ပလီကေးရှင်းသော် လည်းကောင်း၊၀က်ဆိုက်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
2.	လိုတရ အက်ပလီကေးရှင်းကို ဘယ်လို ဒေါင်းလုဒ်ရယူနိုင်ပါသလဲ။
လိုတရ အက်ပလီကေးရှင်းကို အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းအနေဖြင့် *2727# ကိုခေါ်ဆို၍ လိုတရ၏ ဒေါင်းလုဒ် URL ကိုရယူလိုက်ပါ။ လိုတရ၀က်ဆိုက်ဒ်မှ အခမဲ့ ဒေါင်းလုဒ်ရယူနိုင်ပြီး Apple Store နှင့် Google Play Store တို့်တွင်လည်း ဒေါင်းလုဒ်ရယူနိုင်ပါသည်။ (App Store နှင့် Google Play Store တို့မှ ဒေါင်းလုဒ်ရယူခြင်းအတွက် Data Charges များကျသင့်ပါမည်။ )
3.	လိုတရ အက်ပလီကေးရှင်းကို မည်သည့် ဖုန်းအမျိုးအစားများဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသလဲ။
လိုတရ အက်လီကေးရှင်းကို Android ဖုန်းတွင်သာမက iPhone များဖြင့်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ (Android Version 4.4 နှင့်အထက် ဖုန်းများသာ အသုံးပြုနိုင်သည်။)
4.	လိုတရ အက်ပလီကေးရှင်းကို Wifi သို့မဟုတ် တခြားကွန်ယက်များဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
လိုတရ အက်ပလီကေးရှင်းကို Wifi သို့မဟုတ် တခြားမည်သည့်ကွန်ယက်များဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း လိုတရ ၏ အထူးခံစားခွင့်များကို MPT ကွန်ယက်ဖြင့်သာလျှင်ရယူနိုင်မည်။
5.	လိုတရ အက်ပလီကေးရှင်း အသုံးပြုမှုအတွက် ကျသင့်ငွေပေးဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသလား။
လိုတရ အက်ပလီကေးရှင်းကို MPT ကွန်ယက်ဖြင့် အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပြီး အပိုထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုများကို ၀ယ်ယူမှသာလျှင် ကျသင့်ငွေများပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
6.	လိုတရ အက်ပလီကေးရှင်းတွင် မည်သည့် ၀န်ဆောင်မှုများရရှိနိုင်ပါသလဲ။
လိုတရ အက်ပလီကေးရှင်းတွင် နောက်ဆုံးရ သတင်းအစုံ၊ဂိမ်း၊ဗေဒင်၊တရားတော်၊မိုးလေ၀သ သတင်းများ၊ ရှေးဦးပြုစုနည်းလမ်းများ၊ ကူပွန်၊ MPT ၏ အပိုထပ်ဆောင်ဝန်ဆောင်မူ၊ MNL ဘောလုံးသတင်းများ၊ သတင်းနှင့်ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်များ အချိန်နှင့် တပြေးညီ သိရှိနိင်ပါသည်။
7.	လိုတရ အက်ပလီကေးရှင်းတွင် ဘယ်လိုဂိမ်းအမျိုးအစားများ ရနိုင်သနည်း။
လိုတရ အက်ပလီကေးရှင်းတွင် ၀က်ဆိုက်ဒ်မှ တိုက်ရိုက်အခမဲ့ ဆော့နိူင်ပြီး နာမည်ကြီး အက်ပလီကေးရှင်းဂိမ်းအကြောင်းအရာများကိုလဲ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။